Ifulethi eliqaqambileyo kwidolophu esezantsi
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguLaura Et Jean Noël
ULaura Et Jean Noël ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Kufuphi kakhulu kwiivenkile kunye neebhanki zeAnder, sinikezela ngeflethi eqaqambileyo enebalcony, kwindawo yokuhlala ezolileyo nekhuselekileyo, ekwidolophu esezantsi yaseSaint Flour, iikhilomitha ezi-2 ukusuka kuhola wendlela (A75).
I-elevator iya kukuvumela ukuba ufikelele kwigumbi ngaphandle komgudu, kwaye i-wifi yasimahla iya kukuvumela ukuba ucwangcise iintsuku ezintle kulo mmandla mhle. Ekugqibeleni, igaraji iya kuhlala imoto yakho ukuze nayo iphumle ngokukhuselekileyo.
Le ndlu inamagumbi okulala amabini (ibhedi ephindwe kabini kunye nebhedi enye), igumbi lokuhlala elinesofa yekona eguqulwa ibe yibhedi ephindwe kabini ukuba kukho imfuneko; ngaphezu koko, kunokwenzeka ukongeza ibhedi ye-umbrella kunye ne-mattress ene-inflatable (indawo eyi-1 okanye iindawo ezi-2) ngokucela.
Iiseti zebhedi kunye neetawuli zinokubonelelwa njengezongezelelo, kwaye ziya kuhlawulwa xa ufika xa izitshixo zinikezelwe. (ii-euro ezi-4 / ibhedi yamaphepha kunye ne-euro ezi-3 / umntu kwiitawuli)
Umbuki zindwendwe ngu- Laura Et Jean Noël
ULaura Et Jean Noël yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint-Flour